River god, drought blamed for power shortages in Africa | Daily Mail Online
Published: 12:17 EST, 29 October 2015 | Updated: 12:18 EST, 29 October 2015
In this photo taken Wednesday Sept. 2015 a woman uses candle light as she sells fruit on a sidewalk in Harare, Zimbabwe. The normal rains did not fall, which caused water levels to drop in dams that produce electricity, so local people and businesses across Zimbabwe and Zambia are suffering power black-outs for up to 48-hours at a time. Some traditional chiefs blame an angry river god, but the government blames the lack of rain, and work to expand the Kariba power station will not be complete for at least three years, said Partson Mbiriri, permanent secretary in Zimbabwe¿s ministry of energy and power development. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Wednesday Sept. 2015, a student does his homework using a solar lantern in Harare, Zimbabwe. The normal rains did not fall, which caused water levels to drop in dams that produce electricity, so local people and businesses across Zimbabwe and Zambia are suffering power black-outs for up to 48-hours at a time. Some traditional chiefs blame an angry river god, but the government blames the lack of rain, and work to expand the Kariba power station will not be complete for at least three years, said Partson Mbiriri, permanent secretary in Zimbabwe¿s ministry of energy and power development. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Wednesday Sept. 2015, a generator powers a makeshift barber shop in Harare, Zimbabwe. The normal rains did not fall, which caused water levels to drop in dams that produce electricity, so local people and businesses across Zimbabwe and Zambia are suffering power black-outs for up to 48-hours at a time. Some traditional chiefs blame an angry river god, but the government blames the lack of rain, and work to expand the Kariba power station will not be complete for at least three years, said Partson Mbiriri, permanent secretary in Zimbabwe¿s ministry of energy and power development.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Wednesday Sept. 2015, a man buys kerosene at a road side stall in Harare, Zimbabwe. The normal rains did not fall, which caused water levels to drop in dams that produce electricity, so local people and businesses across Zimbabwe and Zambia are suffering power black-outs for up to 48-hours at a time. Some traditional chiefs blame an angry river god, but the government blames the lack of rain, and work to expand the Kariba power station will not be complete for at least three years, said Partson Mbiriri, permanent secretary in Zimbabwe¿s ministry of energy and power development. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)